Ama-Framework ahlukile kuzibuyekezo zezingqikithi. Noma kunjalo, uhlaka lwetheksthi lusebenta njengethemplate yewebhusayithi yentuthuko. Isebenza ukuthi ifakwe esihlokweni esihlukile kepha hhayi ukusetshenziswa njengethi ngokwayo. Ithikili ye-WordPress yomzali ingasebenza 'ngaphandle kwebhokisi,' kodwa uhlaka lwethekimu lungadinga ukuthi isihloko sezingane sibe umsebenzi ophelele. Kungenzeka ukusebenzisa i-plugin ye-WordPress esihlokweni esiphelele Source .